Afaka mamindra ny data haingana kokoa ny fampandrenesana ny mpampita vaovao amin'ny haino aman-jery Signiant | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Afaka mamindra haingana ny angona amin'ny fampandrenesana haino aman-jery an'ny Signiant
Afaka mamindra haingana ny angona amin'ny fampandrenesana haino aman-jery an'ny Signiant
Ny sangan'asa rehetra izay noforonin'ny fampielezam-peo dia mila tehirizina any amin'ny toerana iray. Ary matetika, ny angon-drakitra be loatra dia mety hiteraka tebiteby kely, indrindra rehefa mamindra be dia be. Soa ihany, misy fomba iray ahafahan'ny mpamoaka hafatra hamindra votoaty be dia be, ary dia mandalo izany Signiant ny vahaolana famindrana rakitra hendry.
Signiant ny mifototra amin'ny fivoaran'ny rindrambaiko famindrana rakitra ho an'ny sasany amin'ireo orinasa lehibe manerantany. Ny fananganana orinasa dia misy ny hetsika ny fananganana base code lehibe eran'izao tontolo izao ho an'ny fampandrosoana amin'ny rindrambaiko manerantany. Ilaina ny vahaolana ataon'ny orinasa na aiza na aiza misy ny tsikera ilaina hamindra ireo angon-drakitra lehibe miaraka amin'ny fiarovana, fahatokisana ary hafainganana. Media & Entertainment dia sehatra voalohany nanangana ny teknolojia, miaraka amin'ny Signiant ny Ny rindrambaiko famindrana rakitra dia nanjary ilaina lehibe tokoa tamin'ny tapaky ny taona 2000 raha ny indostrian'ny fifindra-mihetsika amin'ny horonan-tsary sy ny sarimihetsika mankany amin'ny andiam-pamokarana mifototra amin'ny rakitra. Tany am-boalohany dia nahitana orinasa toa an'i Disney, NBC, sy Apple iTunes, izay nampiasaina Signiant ny eny an-tokantrano dia vahaolana amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa teknolojia manerantany.
Signiant nipoitra vetivety ho mpiara-miasa azo itokisana amin'ireo orinasam-baovaom-baovao, ary ny ankamaroan'ny làlan-javamisy any amin'ny haino aman-jery maneran-tany dia entin'ny herin'izy ireo Manager + Agents rindrambaiko orinasa. Ary, raha ny orinasa dia niara-niasa tamin'ny mpilalao malaza be dia be, ny fanoloran-tena mitohy amin'ny fampandrosoana ny rahona-teratany rindrambaiko mahatonga ny vahaolana SaaS ho azy ireo ho an'ny orinasan-jotra maro.
Signiant ny Ny vahaolana famindrana rakitra manan-tsaina dia manampy ireo orinasa haino aman-jery manerantany hihetsika ny petabytes votoaty isan'andro isan'andro amin'ireo tambajotra IP mahazatra. Naorina Signiant ny Teknolojia hanafainganana ny famindrana rakitra, ny vahaolana amin'ny orinasa an-trano sy ny rahona SaaS teratany no mpitarika ny tsena amin'ny fihetsiketsehana lehibe eo anelanelan'ny rafitra, eo anelanelan'ny olona ary hatramin'ny rahona. Ohatra iray amin'izany dia ny vahaolana amin'ny SaaS Media Shuttle.
Media shuttle no natao voalohany tamin'ny 2012 izay nitondrany ny herin'ny teknolojia Signiant, ny fahaizana mamindra haingana sy am-pilaminana izay fisie misy habe, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ary nanao izany ho an'ny orinasa lehibe rehetra izany amin'ny alàlan'ny fametrahana ny toeran'ny endri-javatra mety sy manolotra fonosana sy ny vidiny izay mifanaraka amin'ny filàn'ny tsirairay avy amin'ny trano kely mankany amin'ny konglomerates media.
Rakitra Media Shuttle teknolojia haingam-pandeha mamela ny fitomboan'ny hafainganam-pandehan'ny fifindrana rakitra amin'ny tambajotram-bahoaka sy tsy miankina hatramin'ny 200 avo kokoa noho ny fomba mahazatra (toy ny FTP). Ny teknolojia patin'i Signiant dia saika esorina tanteraka latency, raha mampiasa tsara ny bandwidth misy.
mampiasa Media Shuttle mamela ny fikambanana hanangana ny famindrana rakitra rehetra ao anatin'ny vahaolana tokana. Midika izany fa ny hetsika famindrana sy ny mpampiasa rehetra dia azo arahi-maso, fehezina ary fehezina amin'ny toerana iray. Izany dia manafoana ny fanahiana momba ny kapila mafy, fandefasana rakitra, na manaparitaka azy amina rakitra kely satria mamela ny mpampiasa handefa ny habe misy habe, na aiza na aiza, haingana. Ny vahaolana dia miaraka Famerenam-bokatra, izay mamerina na mamerimberina famindrana tsy nahomby. Famerenam-bokatra ihany koa dia hanampy ireo mpampiasa handray fampandrenesana mailaka rehefa efa alaina ny rakitra. Media Shuttle manana koa ny tetikady famolavolana lalindalina izay manisy fifehezana marim-pototra maromaro ho an'ny rafitra iray, ka tsy maintsy tratran'ny tsy fahombiazan'ny fiarovana maro alohan'ny handraisan'ny mpanafika iray ny loharanon-tsikera.
Media Shuttle dia amin'ny fomba mora indrindra handefasana rakitra be haingana, ary tsy mila fampiofanana izany. Ny mpampiasa iray dia afaka mitsangana ary mihazakazaka ao anatin'ny ora maro, ary tsy mila miantehitra amin'ny IT. Ny tompon'andraikitra amin'ny sehatry ny fantsona dia afaka manara-maso ny fihetsiketsehana rakitra, afaka manampy na manala mpampiasa, ary manamboatra ny vavahadin'izy ireo mba hifanaraka amin'ny fanaingoana ny fiteny sy ny fiteny.
Ankoatry ny Media Shuttle, Namorona ny vokatra SaaS faharoa tamin'ny taona 2014 i Signiant tamin'ny taona XNUMX, Flight, izay teknolojia famindrana rahona haingam-pandeha haingam-pandeha. Flight manafaingana ny fihetsiky ny datasety lehibe mankany sy avy amin'ny rahona ary mahavita hafainganam-pandeha multi-Gbps. Ity vahaolana Saas ity dia matetika ampiasaina amin'ny tetik'asa famokarana angon-drakitra rahona lehibe, indrindra ireo izay mahafaoka famaritahana votoaty avy amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao. Flight ny Ny fandrosoana ara-teknolojika navelan'ny Signiant hampiditra ny fitahirizana rahona ao amin'ny Media Shuttle, izay nanitatra bebe kokoa ny fangatahana vahaolana hampidirana arofanina rahona.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Media Shuttle sy Flightdia tsidiho ny www.signiant.com/company/.
Inona no mampiavaka ny famantarana Signant?
Signiant ny ny maha-tsy manam-paharoa dia hita ao amin'ny firafitry ny SaaS. Ny sonia dia manolo-tena fahaleovantena fitahirizana, ny fanohanan'ny rakitra eny an-toerana sy ny fitahirizan-javatra, ny fametrahana rahona ho an'ny besinimaro avy amin'ireo mpivarotra anisan'izany ny Amazon sy Microsoft, ary koa ny fitahirizana fibrida izay misy eo an-toerana sy ny fitahirizana rahona. Ny maritrano SaaS orinasa dia mamela ny mpampiasa iray hampiasa ny herin'ny vahaolana SaaS ambaratonga fandresena, ary ao anatin'izany ny fidirana, ny fitaterana sy ny fanaraha-maso ny fiasa amin'ny tranokala azo antoka. Ary azo tanterahina izany raha mifandraika amin'ny fitahirizana azy, na eo amin'ny trano izany na ao amin'ny rahona. Ity fomba ity dia ahafahan'ny orinasa mahazo ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa: fidirana manerantany amin'ny fifehezana tanteraka ny fananany sy ny trano fitahirizana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Signiant, tsidiho www.signiant.com/.
fahitalavitra CES2017 rindrambaiko vita amin'ny rahona Flight konglomerates media iraisampirenena Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor famindrana rakitra hendry Media Shuttle MStar Ny maritrano SaaS SaaS Solutions Signiant Ny teknolojia patin'i Signiant SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 Storage 2020-04-27
Previous: Mpampianatra CTE, Production Video - Pajaro Valley High School (.6 FTE)
Next: Mahafantatra ny mpiara-miombon'antoka farany amin'ny haino aman-jery sy fialamboly ao amin'ny VirtualQ | NAB Partners Event